Gadoodkii Taliye Muxiyadiin Gacamay oo Wadahadal lagu soo afjaray iyo Nuxurka Qodobada lagu Heshiiyay. | SAHAN ONLINE
Gadoodkii Taliye Muxiyadiin Gacamay oo Wadahadal lagu soo afjaray iyo Nuxurka Qodobada lagu Heshiiyay.
Heshiis ramsi ah ayaa lagu soo dabaalay xiisadii ka dhalatay gadoodkii ciidmadii uu hoggaaminayay Taliye k/xigeenkii hore ee Booliiska Puntland Gen Muxiyadii Gacamay, oo ciidamo daacad u ah iyo ciidamadu Dowladu puntland ay isku horfadhiyeen degaanka Qarxis ee gobolka Nugaal.
Xiisadan oo muddo Labo billood soo jiitamaysay, marar badana la isku dayay in la xaliyo ayaa maanta la soo afjaray, ka dib markii uu Generaal muxiyadiin uu ka tanaasulay dalaabadyo badan oo uu dalbanayay, islamarkaana dowladu ay ballanqaaday in amnigiisa ay sugi doonto
Qodobada lagu soo afjaray xiisada.
In ciidamada gadoodsan lasoo xereeyo dibna ay ugu soo noqdaan saldhigyadii ay ka hawlgeli jireen.
In dowladdu kafaalo qaaddo ammaanka Gen. Muxiyadiin iyo Col. Cabdiyare maadaama ay yihiin saraakiil usoo shaqeeyey hay’adaha ugu sarreeya amniga.
In dib u qarameynta ciidanka uu hormuud ka noqdo Gen. Siciid Dheere.
In dowladdu si siman ula dhaqanto ciidamada islamarkaana siiso xuquuqda ka maqan.
In laga wada-shaqeeyo amniga, meelna looga soo wada jeesto cid kasta oo loo arko inay jebisey qodobadii lagu heshiiyey.
Dadka reer Puntland ayaa si weyn usoo dhoweeyey heshiiska taariikhiga ah ee laga gaarey xiisadda Qarxis, maadaama Puntland xilligan ku jirto xaalad adag oo aysan xamili karin qalalaase gudaheeda ka dhaca.
Heshiiskan lagu soo afjaray xiisada ka dhalatay gadoodkii uu sameeyay General Muxiyadii, ayaa waxa la sheegay in soo afjarideeda ay ka qaybqaateen Ra’isul wasaaraha Somalia Cumar C/rashiid Cali sharma’arke oo maalmaha safar shaqo ku joogay Puntland, Islaan Ciise islaan Maxamed, Suldaan siciid Maxamed Garaase iyo Qaar ka mid ah culumada waaweyn ee puntland.